5 Toerana mahafinaritra indrindra Train dian'i In Italia | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > 5 Toerana mahafinaritra indrindra Train dian'i In Italia
Lamasinina nandehanany any Italia tsy manolotra fampiononana fa ny sasany mahavariana hevitra. Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny mandray ny fiaran-dalamby in Italia dia ny fahafahana hijery ny tsara tarehy toerana manodidina rehefa mandeha amin'ny toerana iray hafa. Amin'ny faritra sasany ao Italia, Toerana mahafinaritra misy fiaran-dalamby lalana izay fotsiny fombafomba fitaterana. Toerana mahafinaritra ireo fiarandalamby dia hitondra anareo ho any amoron-tsiraka hevitra, tendrombohitra miavaka toerana manodidina, farihy mamirapiratra sy ny sisa maro hafa. Ireto ny 5 Toerana mahafinaritra indrindra lamasinina dian'i in Italia.
Dia aoka isika hanokatra ny lisitry ny 5 Toerana mahafinaritra indrindra lamasinina nandehanany tany Italia tamin'ny – Levanto ho La Spezia – Cinque Terre
Fiaran-dalamby lalana manaraka ny manaitra Italia dranomasina no anisan'ny mahafinaritra indrindra. The Cinque Terre lalamby manompo ny dimy Italiana Riviera vohitry ny faritra tamin'ny fomba mampivarahontsana tokoa. Relax behind panoramic windows and soak up beautiful mountains, ny robina ranomasina, bucolic tanim-boaloboka, ary ny sahan'oliva. Makà lamasinina eo Levanto sy La Spezia ho fohy, fa tsara tarehy dia tsara tarehy. Raha vao efa tonga ny toerana halehany, Avy eo dia afaka mandany ny andro tongotra lavitra ny mahagaga tanàna.
La Spezia ny Levanto Lamasinina
#cinqueterre in L❤️ve ny @andreabelussiphotographer #cinqueterrelove #love #italy #paradise #monterosso #vernazza #manarola #riomaggiore #corniglia #sea #ig_liguria_ #colors
Lahatsoratra iray nozarain'i Cinque Terre Italy (@cinqueterre_love) amin'ny Apr 9, 2016 amin'ny 3:22pm PDT
Naples any Sorrento
Travel from Naples to Sorrento and pass through the archaeological sites of Herculaneum and Pompeii. This fabulous journey provides views of Volkano Vésuve and the Bay of Naples along the way. izany mitaingina fiaran-dalamby is certainly one of the Toerana mahafinaritra indrindra lamasinina nandehanany tany Italia.
Rimini ho Catania – miaraka amin'ny Italia ny morontsiraka atsinanana
Ny tsara indrindra fomba mba handeha amin'ny amin'ny faritra avaratr'i Italia ny Southern Italia dia nidina ny East Coast lamasinina. Ny tsipika mirazotra mihazakazaka any amoron-dranomasina nandritra ny adiny enina manontolo ny mampino toerana manodidina. Manomboka amin'ny Rimini, haka seza niatrika forwards ka handray hitsangatsangana eo aminareo ny mahafinaritra diany! En-dalana ho any Catania, ny fiaran-dalamby voasarimakirana miampita ny Aseraha sy ny ranoka volkano tsy fampindramam, amin'ny fiatoana amin'ny mahaliana peo manerana ny dia.
Tao an-varavarankely, Catania #flowerstagram #photooftheday #flowerslovers #flowerstyles_gf #loves_united_catania #flowers #vivocatania #amazing #catania #sun #autumn #autunno #sopretty #blooms #love #window #floral #nature #picoftheday #sunraylabs #flowersofinstagram #floweroftheday #flowermagic #tramonto # fotoana fivelaran'ny #instablooms #torino #cataniabedda #beautiful #soleil
Lahatsoratra iray nozarain'i E. Emancipato Photography © (@ edoardo.emancipato) amin'ny Nov 15, 2017 amin'ny 7:55pm PST
Venice ho any Florence – 5 Toerana mahafinaritra indrindra lamasinina dian'i in Italia
Mahita roa malaza Italia ny tanàna tsara tarehy lamasinina dia in-eo. The diany avy any Venice ny Florence mitondra anao miaraka fofonaina-toerana tsara tarehy sy ny fandraisana mahafatifaty tanàna. Zavatra tsy lavitra adiny roa ihany no lava, fa dia tena iray Niana-javatra be. Tsy misy fomba tsara kokoa nandeha teo anelanelan'ny tanàna roa.
Milan to Bolzano is our last pick for the 5 Toerana mahafinaritra lamasinina dian'i in Italia
Mahatsapa tena tsara mitaingina fiaran-dalamby avy any Milan ho Bolzano. Maka anao amin'ny renivohitry ny lamaody amin'izao tontolo izao ho any amin'ny jagged sy miavaka tendrombohitra vatolampy izay mahaforona Italiana Alpes. Jereo ny Italia ny tanàna taloha, mahafinaritra ambanivohitra sy ny tsara indrindra sy ny sary tendrombohitra any Eoropa. Bolzano niditra dia toy ny mandao Italia sy miditra Alemaina, tanàna kely ity dia alemà ny amin'ny miseho ihany satria anisan'ny Aotrisy before World War I. Toerana mahafinaritra ity fiaran-dalamby dia dia mahagaga!
Trento ho Bolzano Lamasinina
Milan ho Bolzano Lamasinina
Bologna ho Bolzano Lamasinina
Venice ho Bolzano Lamasinina
Mieritreritra ny nandray fiaran-dalamby ny toerana tena Eoropa tanàna? Mandehana amin 'ny tranonkala Saveatrain.com izay hijery manokana ny manjo rehetra sy ny manaraka manomboka mieritreritra traikefa nahafinaritra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-most-scenic-train-journeys-in-italy-save-a-train-blog/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#railjourney #Toerana mahafinaritra #scenictrips longtrainjourneys Train Travel Views
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Mey 2021Jun 2021Jul 2021Aog 2021Sept 2021